Enwere m mmasị na ntaneti m na kọlụm nke ise, mana echere m na ha nwere ike ịmịpụta ọtụtụ ole na ole na-elele anya nke Diggnation. Ugwu N'ezie? Site na ntụgharị uche ọ bụla, Digg bụ ili Dugg na StumbleUpon bụ onye na-akụ okooko osisi. N’oge na-adịghị anya? Ndo ndi ozo… mgbe ndi na ege nti puru, ngwa nke ndi mmadu anwu. Ọ bụ mgbasa ozi mgbasa ozi. Ma chere… n'ezie… anyị Agbaghara LinkedIn, oke? Azụmaahịa Google? Ị na-egwusa m egwu? Ikekwe ọ bụ ihe
Ndenye Blog: SR Coley
Nke a bụ ihe pụrụ iche! Stephen bụ ezigbo enyi nwa m nwoke, nke Bill. Stephen bu ezigbo mmadu - mara ihe nke ukwuu, nwee oke mmasi, ma nwee ndidi. Amaara m mgbe ọ na-egbu m ụra maka ajụjụ ọ nwere ike ọ na-arahụ ụra ụra abalị n'ihi ya enwere m obi ụtọ inyere ya aka. Blog nke Stephen kwesiri inwe mmasi nke ukwuu n’aho na abia o na aga Germany. A maara Germany n'ezie maka enweghị ndị na-ede blọgụ.
Mgbe m zipụrụ vidiyo na-atọ ọchị banyere Bill Gates na Napoleon Dynamite, ebumnuche m bụ ịhụ mmetụta Digg nwere ike igosi ndị ọzọ na m blọọgụ. Nakwa, ebumnuche m bụ igosipụta nsonaazụ nke "Digg Effect". Noah na Okdork na-edebe m n’eziokwu na nke a. "The Digg Effect" bụ katapila na akụ na saịtị gị na-enweta mgbe ị nyefere akụkọ site na Digg na ndị ọzọ "Diggers"
Mmetụta Digg: Ezigbo Ọdịnaya + ịkparịta ụka n'=ntanet = BIG HITS
Mmetụta Digg bụ nke a na-atụlekarị. Ọtụtụ mmadụ na-akwagide ịme Digg, mana ọ bụ n'ezie usoro dị ukwuu iji nweta ọgụgụ akwụkwọ? Nke a bụ ihe mere mgbe saịtị m bụ 'Dugg'.
N’ọnwa a ka anyị hụrụ ọhụụ dị ala maka onyogho onyonyo igwe onyonyo. M na-a na-akatọ nke mainstream media, nọrọ m afọ iri mbụ nke ahịa na akwụkwọ akụkọ azụmahịa. Enwere ihe ịrịba ama nke mgbanwe n’ebe ndị ọzọ, agbanyeghị. Dị ka ihe atụ, Sci Fi Channel tinyegoro Pilot Online maka katuun ọhụrụ, Ihe ịtụnanya Na-atụ Isi. Ha jikọtara onye na-anya ụgbọelu na Survey gbasara ihe nkiri ahụ. (Ọ bụrụ na ị nweta ohere,